July 31, 2021 August 8, 2021 N88LeaveaComment on शास्त्र अनुसार कुन काम कुन बार शुरु गर्दा हुन्छ राम्रो ? थाहा पाउनुस्
हरेक व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशीले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। जन्मेको बार र राशिले उनीहरुको स्वभाव र भविष्य समेत बताउने गर्छ। त्यसैगरी तपाईको जागिर वा व्यापारमा समेत राशी र जन्म बारको ठूलो प्रभाव पर्ने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुनै पनि कार्य नोकरी वा व्यापार सुरु गर्दा आफू जन्मेको बार र राशीमा समेत ध्यान पुर्याउन […]
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर देखाउने दावी गरेका छन्। पार्टीको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्वहरु अब पार्टी भित्र नरहेकाले बहुमत ल्याउन सकिने उनको तर्क थियो। ‘अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर देखाउँछौं। किनभने पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्वहरु छैनन्। अगाडि […]
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ठानेर जालझेल नगरियोस् : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ठानेर जालझेल नगर्न चेतावनी दिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संकेत गर्दै नेता नेपालले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जालझेल नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । अखिल फोर्सले आज (शनिबार) आयोजना भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने, […]
माओवादीबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ? फाइनल नेमलिस्ट तयार
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on माओवादीबाट को-को बन्दैछन् मन्त्री ? फाइनल नेमलिस्ट तयार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार बिहान देउवासँगको भेटवार्ताका लागि बालुवाटार पुगेको देउवानिकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम सिफारिस गरेको बुझिएको छ । यद्यपि […]
हिजो साँझको घटनाबारे पारस शाह बोले
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on हिजो साँझको घटनाबारे पारस शाह बोले
काठमाडौं । शुक्रबार साँझ हेल्मेट नलगाएका कारण प्रहरीले रोक्दा उल्टै प्रहरीलाई अ भ द्र व्यवहार गर्नुभएका पूर्वयुवराज पारस शाहले स्पष्टीकरण दिनु भएको छ । उहाँले उक्त घटनालाई लिएर आफ्नो धारणा राख्नु भएको हो । उहाँले हार्ली डेभिड्सन मोटरसाइकल चलाउँदा हेल्मेट लगाउनु नपर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभएको छ । शाहले आफूले चलाउने पारस शाह ज्याक नामक […]
July 31, 2021 July 31, 2021 N88LeaveaComment on पारस शाहका समर्थकले भने- पूर्वयुवराजलाई इज्जत दे !
काठमाडौं । पूर्वयुवराज पारस शाहका समर्थकहरुले काठमाडौंको महाराजगञ्जमा नाराबाजी गरेका छन् । पूर्वयुवराज शाहमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै उनी समर्थकहरुले सडकमा टायरसमेत बालेका छन् । ‘युवराजलाई इज्जत दे’, ‘राजतन्त्र जिन्दावाद गणतन्त्र मुर्दावाद’लगायतका नारा लगाउँदै पारस समर्थकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले केहीबेर सडकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए । यसअघि आइतबार (हिजो) साँझ महाराजगञ्जमा बिनाहेल्मेट मोटरसाइकल हाँकेका […]
भरतपुर । चितवनको माडीमा प्लटिङ गरिएको एक सय विघाभन्दा बढी जमिन मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(क्रान्तिकारी)माओवादीले क’ ब्जा गरेको घो’ षणा गरेको छ। काठमाडौंको ट्वान्टी वान ग्रुप प्रोपर्टी डिलर्स प्रालिले प्लटिङ गरेर विक्री वितरण गर्दै आएको माडी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेको जमिनमा पार्टीको झण्डा गाडेर क’ ब्जा गरिएको जिल्ला इन्चार्ज घननाथ सापकोटाले जानकारी दिए। माडी–३ पौवारीमा […]
July 31, 2021 N88LeaveaComment on बालुवाटारमा यसरी चल्छ ‘राणा शा’ सन
काठमाडौं । घरपरिवारले शेरबहादुर देउवासँग बिहे गर्न धेरै कर गरेपछि त्यो बेला आरजु राणाले एउटा शर्त तेर्स्याइन्- ‘बिहे गरेर म गृहणी भएर बस्न सक्दिनँ। तर अरू व्यवस्थापनचाहिँ गर्नसक्छु।’ त्यो २०४९ सालतिरको कुरा थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भइसकेका थिए। देउवाले आरजुको त्यो प्रस्ताव सजिलै स्वीकार गरिदिए। दुई वर्षअघि देउवाले गरेको प्रस्ताव त्यसपछि […]
यसरी पढ्नुस् लाेकसेवा १०० % पास
July 31, 2021 July 31, 2021 N881 Comment on यसरी पढ्नुस् लाेकसेवा १०० % पास
काठमाडाैं । लोकसेवाको परीक्षा तयारी गरिरहेकाहरुको संख्या निकै ठूलो छ । एक पटक दुःख गरेपछि जीवनभर सजिलैसँग जीवनयापन गर्न पाइने भएकाले पनि युवाहरूकाे पहिलाे प्राथमिकतामा सरकारी जागिर नै पर्ने गरेकाे छ । सरकारी जागिर खाने सपना बोकेर लोकसेवा पढ्नेहरु नपढेर भन्दापनि पढ्न नजानेर असफल भइरहेको लोकसेवा अध्यापन गराउनेहरुको तर्क छ। त्यसैले विभिन्न विज्ञहरूसँगकाे परामर्शमा सरकारी […]
एमाले एकता भए देउवा सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने
July 31, 2021 N88LeaveaComment on एमाले एकता भए देउवा सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत पाउन सफल भएका छन् । उनको यस नियुक्तिलाई धेरैले आउँदो १७ महिना ढुक्क भयो भन्ठानेका छन् । तर, एमाले एकता भएमा जुनसुकै बेला सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ । सामान्यत: एकपटक प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । देउवाले नयाँ […]